Ukungajabuli, uchungechunge olusha oluvela kumdali we-The Simpsons yeNetflix | Izindaba zamagajethi
Disenchantment, uchungechunge olusha oluvela kumdali weSimpsons yeNetflix
UMat Groening, umsunguli wochungechunge lwehlelo Futurama futhi nokwaziwa kangcono kakhulu Ama-Simpsons, izobuya ne- uchungechunge olusha lokugqwayiza kwabantu abadala isethwe eNkathini Ephakathi ezokhishwa kuphela ku- Netflix, ingxenyekazi enkulu kunazo zonke yokusakaza ividiyo emhlabeni.
Isihloko salo mkhiqizo omusha sizoba ukudumazeka okwabenza (Ukwehliswa); izodlala inkanyezi i-Princess Bean futhi izokhipha ukubhuqa kuyo yonke indawo, into lo mdali asisebenzisile, nokho kulokhu ukuqondiswa kwezethameli zabantu abadala kungabonakala kakhulu.
Ukungajabuli nezwe namandla ethu okunqoba
Yize kunguchungechunge lwe-animated, ukudumazeka okwabenza (Disenchantment) unomyalezo ojulile impela, ngokusho kwezitatimende zikaMat Groening, “ukungajabuli kwempilo, ukufa, uthando nobulili, nokuthi siqhubeka kanjani nokukwazi ukuhleka umhlaba ogcwele ukuhlupheka neziphukuphuku ”kwakha umgogodla ophakathi nesiphakamiso sakhe esisha.
Uma i- "The Simpsons" yenzeka esikhathini samanje futhi i- "Futurama" ithathe igxathu elikhulu laya phambili ngesikhathi, ukudumazeka okwabenza izobuyela emuva eminyakeni eyikhulu edlule ukuze ikhule ibe umbuso wasendulo we-Dreamland.
Okunye okusha okusha ngochungechunge ukuthi izobonakala i-protagonism yabesifazane UPrincess Bean uzoba ngumlingiswa ophambili, yize ezobe ephelezelwa idimoni uLuce, u-Elfo futhi sizobona abathakathi abaningi, amahabhu, ama-ogre, ama-troll nakho konke okufana nomcabango wasenganekwaneni weNkathi Ephakathi.
ukudumazeka okwabenza eza kuNetflix kuphela ngo-2018 ngenqwaba yokuqala yeziqephu eziyishumi esizo "zishwabadela" ngomdlandla omkhulu. Vele, isivumelwano sokuqala sezahluko ezingamashumi amabili ngakho-ke sesingathembela esikhathini sonyaka wesibili cishe esiqinisekisiwe.
Ngizo ukudumazeka okwabenza ukudluliswa kwe-The Simpsons, uchungechunge oselumemezele ukuphela kwalo iminyaka ethile?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » Disenchantment, uchungechunge olusha oluvela kumdali weSimpsons yeNetflix
INoontec Hammo HD, ama-headphone angenantambo nawekhaya
Zingakanani izinsiza zokusakaza umculo ezikhokhela abaculi ekusakazeni ngakunye